China Submersible Axial, Mixed Flow mgbapụta emepụta na suppliers | KAIQUAN
Submersible Mixed Flow mgbapụta
Okacha mma maka mmiri mmiri nke obodo mepere emepe, ọrụ mgbapụta mmiri, sistemu mmiri nsị ndị mepere emepe, ọrụ ịsachapụ mmiri, mmiri ọdụ ụgbọ mmiri, mmiri mmiri na mmiri mmiri, nnyefe mmiri na-enyefe mmiri, ịmị mmiri mmiri, mmiri ozuzo, wdg.
Submersible mbuaha-eruba mgbapụta nwere nnukwu arụmọrụ na ezi cavitation arụmọrụ. O kwesịrị ekwesị maka oge nwere nnukwu mgbanwe ọkwa mmiri na isi chọrọ isi. Isi ojiji dị n'okpuru mita 20.
Na-asọ: 460-90000m3 / awa
Isi: Ihe ruru 22m
Liquid okpomọkụ: º 40ºC
Ọ nwere ike ibufe mmiri dị ọcha na obere nsị: na ihe kachasị agafe agafe abụghị ihe karịrị 100mm
ZQHQ Series Submersible Axial, Mixed Flow mgbapụta
Ngwunye Axial, Ngwakọta Fdị ala Mgbapụta Uru:
1. Akwa ime mgbanwe
(1) Nwere ike ibufe mmiri dị ọcha na obere mmetọ mmiri, yana ọnọdụ mgbasa ozi ruo 40 ℃ na PH uru nke 4-10; Oke kachasị nke ihe a na-agafe agafe bụ 100mm.
(2) Ngwa: mmiri mmiri mepere emepe, ọrụ ntụgharị, usoro mmiri nsị na mmiri mmiri, ọrụ ọgwụgwọ mmiri nsị, sistemụ mmiri ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri, mmiri na nsị mmiri maka ọdụ ụgbọ mmiri, ntinye ntanetị na mmiri, mmiri na mmiri mmiri, aquaculture na wdg. Submersible axial flow pump na arụmọrụ dị elu na arụmọrụ mgbochi cavitation, kwesịrị ekwesị maka oge nwere nnukwu mgbanwe dị iche iche mmiri na isi dị elu, nke dịkarị n'okpuru 20m.
2. Obere ego na ebe mgbapụta, na ọrụ dị mfe na njikwa
(1) Mgbapụta ahụ na-arụ ọrụ n'okpuru mmiri, ọ na-achọ obere ọrụ ụwa na injinia usoro na iwu ụlọ mgbapụta yana obere ebe ntinye. N'ihi ya, owuwu ihe owuwu ahụ nwere ike belata 30-40%
(2) Njikọ nke moto na mgbapụta na-azọpụta oge na ọrụ na-arụ ọrụ na saịtị usoro nke 'moto-nnyefe usoro - mgbapụta axis na-etiti', si otú a na-eweta ntinye na ngwa ngwa ngwa.
(3) Nchịkọta dị mfe, na ọnụ ala njikwa na ịrụ ọrụ.
(4) Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na njikwa na akpaka.
(5) Obere mkpọtụ, na-enweghị mpaghara okpomọkụ dị elu na ọdụ mgbapụta; hụ na arụ ọrụ gburugburu ebe obibi nke ọma; enwere ike ịmebe ọdụ ụgbọ mmiri dị n'okpuru ala dịka ihe achọrọ, ka ijigide ụdị gburugburu ebe obibi na atụmatụ dị na ala.
(6) Ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji dozie nsogbu mgbochi ide mmiri maka moto ndị arụnyere na ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị n'akụkụ osimiri na ọdọ mmiri nwere nnukwu ọkwa mmiri. Na mgbakwunye, site na ịchekwa ogologo axis na etiti dị n'etiti moto na mgbapụta, otu nwere ike ịgba ọsọ karịa na ntụkwasị obi.
3. Nnukwu ntụkwasị obi, enweghị mkpọtụ, na mkpọtụ dị ala
(1) Na ezigbo hydraulic nlereanya, hụ na ọrụ ndị ọrụ chọrọ. Mgbanwe na usoro ọdịnala maka ndị ọrụ ịhọrọ. Enwere usoro nfuli ndị a, nke nwere oke arụmọrụ dị elu, na-etinye aka na ọnọdụ ọrụ dị iche iche, nrụpụta ike dị elu, na ụgwọ ọrụ dị ala.
(2) akuku akuku abuo ma obu okpukpu ato na-egbochi ihipu mmiri. A na-etinye usoro ntinye pụrụ iche nke pụrụ iche nke nwere ezigbo usoro dị mma yana ogologo ndụ ọrụ.
(3) Na mkpuchi F, ma jiri nchebe okpomọkụ, nlekota, leakage sensor na mpaghara ịdọ aka ná ntị ndị ọzọ bịa.
(4) Na ezi jụrụ ọnọdụ dị ka submersible na mmiri, stablerụ ọrụ ike na kacha nta vibration, na ala mkpọtụ.
Nke gara aga: Mincing Submersible nsị mgbapụta
Osote: Mmiri Ngwunye Mmiri Mmiri (0.75-7.5Kw)
Submersible Axial, Mixed Flow mgbapụta Structural Diagram
Submersible Axial, Ngwakọta Mgbapụta Na-agwakọta Igwe Ihe Omume na Nkọwa
emeghe ọma submersible mgbapụta
submersible ọdọ mmiri mgbapụta
price mgbapụta submersible
submersible sump mgbapụta
submersible ọma mgbapụta
mmiri mgbapụta mgbapụta